Ardeyda 9 IT Koorsooyinka Ardaydu waa inay qabtaan kaddib markay gudbeen imtixaanka Guddiga 12th - ITS
Ardeyda 9 IT Koorsooyinka Ardaydu waa inay qabtaan kaddib markay gudbeen 2017 12th Guddiga Guddiga
IT Koorsooyinka iyo Shahaadada ka dib imtixaanka 12th
1. Hordhaca Java
4. Astaamaha Daruuriga ah
5. Xaqiiqda Wicitaanka
7. Ammaanka +
9. Xaqiiqda isku dhafan
Natiijooyinka CBSE XII ayaa soo baxaya, arday badan ayaa soo kici doona qirashada in ay tahay waqti aad u xulato koorsada. Koorsooyinka IT-da waxay bixiyaan fursad aad u fara badan maadaama ay aad u raadsadeen kadibna ay awood u siin karaan dadka inay si firfircoon uga baahdaan baahida digital-ka ah ee weli taagan. Waa kuwan qaar ka mid ah koorsooyinka qiimaha leh ee ardayda 12th ayaa go'aan ka gaari kara.
Magaca koorsada: SCJA OCP Java SE 7 Barnaamijka Koorsada Tababarka iyo Shahaadada
Koorsadani waxay siineysaa barashada horumarinta arjiyada ardayda. Tani waa marxalad aad u wanaagsan si ay u abuurto xarun barnaamijka Java ah iyo in la ogaado fikradaha sida isku xirka, dhidibada, iyo dhaxalka.
Dheefaha - Iyadoo suurtagal ah in lagu hormariyo Java, waxaad noqon kartaa barnaamijka Java. Intaa waxaa dheer, ka dib, waxaad noqon kartaa inaad buuxiso mashaariic mashruuc ama barnaamijyada barnaamijka oo ah meesha ugu saraysa ee macluumaadka hoose ee Java waxay awood u siin doontaa inaad abuurto qorshe wax qabad ah inta aad kormeereyso hababka.
Magaca koorsada: 10266A: C # Tababarka Aasaasiga ah
Qorshaha koorsada koorsada waxaa ka mid ah qaabka barnaamijka C #, hirgelinta, iyo qoraalka luuqadda. Heerka hooseeya ee dhexdhexaadiyeyaashu waxay ku qaataan barashada iyo qaababka loo baahan yahay inay soo saaraan codsiyada C #. Koorsada sidoo kale waxay daboolaysaa mawduucyada sida .NET Framework, isticmaalka studio-ga muuqaalka ah iyo C # si loo abuuro. NET Framework.
Dheefaha - Dhismaha C # wuxuu kuu diyaarin doonaa inaad noqotid injineernimo iyo barnaamijyada mashiinka.
Magaca koorsada:CompTIA Linux +
Koorsada Linux + wuxuu ku dhiirigeliyaa inaad ku guuleysatay saddex shahaadadood - CompTIA Linux +, LPIC-1, iyo Maamulaha Novell Certified Linux. Mawduucyada daboolay koorsada waxay awood kuu siinayaan inaad fahamto fikradaha ku saabsan alaabta Linux, Debian, iyo Ubuntu.
Dheefaha - Markaad dhameysid kooraskan waxa aad awood u yeelan doontaa inaad kantaroosho qalabka, adoo adeegsanaya helitaanka fog, maareynta maamulada, soo saarida tirakoobka diiwaanka iyo waxqabadyada kale ee la xidhiidha barashada Linux. Waxaad noqon doontaa aqoon aad u qallafsan oo leh xaalad aan caadi aheyn oo awood u leh inuu tallaabo qaado marxaladdan adag ee ganacsiga software.
Magaca koorsada: CompTIA Cloud Essentials
Ardayda natiijadoodii 12aad ee fasalka u soo baxday waxay sameyn karaan kooraskan kaas oo iyaga u qaabeyn doona fikradaha xisaabinta.
Dheefaha - Maaddaama ay ardaydu kor u qaadaan fahamka hoose ee istaraatijiyadaha maamulka daruuriga. Waxay soo aruurin doonaan warar macquul ah oo ku saabsan qaybaha adeega daruuraha ee dhinaca farsamada iyo ganacsiga, kuwaas oo hadda ah shuruud looga dhigayo jagooyinka la ixtiraamo ee labada IT iyo kuwa aan IT-ga ahayn.
Magaca koorsadae: Xaqiiqda Wicitaanka leh Unity Motor, Google Cardboard, iyo Oculus Rift
Koorsadani waxay siinaysaa tababar gacmeed oo ku saabsan mashiinka Unity3D si loo abuuro xaalad dhaf ah Oculus Rift iyo Kaararka Google.
Dheefaha - Waxaad dhisi doontaa aasaas adag oo ku saabsan tiknoolijiyada xaqiiqada muuqaalka ah iyo codsiyada casriga ah. Inta ugu badan ee ku habboon ee naqshadayaasha cayaaraha sanadka, koorsadani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan koorsooyinka ardayda.
Magaca koorsada: CompTia Server +
Koorsadani waxay dabooshaa mawduucyada sida software, qalab, kaydin, soo kabashada musiibada, hababka ugu fiican ee xaaladda IT iyo xalinta dhibaatooyinka. Halkaan waxaan ku baraneynaa kaydka nidaamyada isku-dabarida oo ay weheliyaan fikradaha soo kabashada musiibada.
Dheefaha - Intaa waxaa dheer in ujeedada koorsadani ay tahay kooras aan caadi aheyn oo iibsanaya waxqabadka ku saabsan serverka websaydhka iyo tignoolajiyada gaarka ah ee webka. Ka qaybqaadashada, waxaad noqon kartaa aqoon fiican oo IT ah oo ku xiran, hagaajinta iyo dhibaatooyinka shabakadaha xuduudaha ee gudaha.
Magaca koorsada: CompTIA Security + Tababbarka Shahaadada
Koorsadan IT / Kombuyuutar kaddib laba iyo toban ayaa ku siinaya fursad aad ku baratid barashada xogta macluumaadka ee shabakadaha dhabta ah. Waxaad abuureen fikrado adag oo ku saabsan amniga IT-ga sida adeegsiga aqoonsiga, yaraynta khatarta iyo maamulka khatarta, cryptography, kaabayaasha amniga, xakamaynta shabakadda iyo dad kale oo badan.
Dheefaha - La qabsasho si aad u noqoto khabiir amniga, lataliyayaasha amaanka ama injineernimada amniga. Maadaama dambiyada internetku ay kor u kacaan, kor u kaca internetka ammaanka waxay noqon kartaa doorasho khaas ah oo mushahar leh.
Magaca koorsada: CompTIA N +
Koorsadani waxay bixisaa tababbar hoose oo aasaasi ah oo lagu rakibo, lagu dhejiyo, dayactiro, kormeerka iyo xalinta dhibaatooyinka shabakadaha shabakada.
Dheefaha - Waxaad dejin doontaa awoodda aad ku kala gedisan tahay qaababka nidaamyada shabakada, qaybaha LAN iyo fulinta Wan, arimaha ammaanka shabakada iwm. Ma jiro shirkad maanta ka shaqayn karta iyada oo aan kormeeraha shabakada, isagoo intaa ku daray in caanaha koorsadan iyo xasiloonida xirfadeed ee dambe. .
Magaca koorsada: Xaqiiqo isku dhafan (AR iyo VR) Iyadoo Unity 3D iyo Microsoft HoloLens
Sameynta koorsadani waxay ku siinaysaa fursad aad ku soo gasho Real Reality iyo Real Virtual iyadoo loo marayo HoloLens oo aad fikrad ka qabto shaqada adag ee adduunka. Waxay ku soo bandhigaysaa heerka HoloLens iyo hababka ugu fiican ee loola xiriiri karo kombiyuutarada.
Dheefaha - Markaad barato oo aad saxdo xakameynta maareynta iyo maaraynta maareynta, ku jees jeeso farxaddaada ogaanshaha iyo kormeerida xaqiiqada ficilka ah iyo balaarinta xaqiiqda iyo in loo bedelo xirfad guul leh.
Xiritaannada, ha ahaato sida aad u maleyneysey imtixaanaadkaaga laba-jeer ee guddiga dhismaha, waxaad ku adkeysan kartaa inaad ku qanacsan tahay inaysan jirin xulasho xirfadeed ka dib imtixaanka laba-labo-jirka ah. Marka laga eego danaha iyo himilooyinka, ardaydu waxay dooran karaan mid ka mid ah koorasyada kor ku xusan si loo dhiso saldhigga ugu fiican ee xogta iyo calaamadaha iyo dammaanad qaadashada mustaqbal wanaagsan.
Sidee loo abuuraa Xirfadaha Diiwaanka Dijital ah?
Maxay shirkadu uga rabaan Xirfadayaasha Amniga iyo Admins CEH Certified?